धर्मशास्त्रले भने झै 'के पृथ्वीबा'हेक अ'न्य ग्र'हमा मानव बस्ती होला त ?' - Filmy News Portal Of Nepal
हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ वेद’ हो । वेद विश्वका सबै धर्म ग्र’न्थहरूको पिता पनि भन्ने गरिन्छ । मं’गल ग्र’ह भूमि यानिकि जमिनका पुत्र हुन् भनेर मानव सभ्यताको विकाश न’हुँदै यही वेदमा लेखिएको छ । वेदले मंगल ग्रहलाई भगवानको संज्ञा दिएकाले धर्ममा विश्वास गर्नेहरुले आजका दिनसम्म वैदिक विधिअनुसार नै पूजा गर्दै आइरहेका छन् ।
नौ वटै ग्रहहरुको मन्त्र वेदमा छन् । वेद कुनै मानवले कल्पना गरेर लेखिएको पुस्तका होइन । एक हजार पूर्णिमा देखेमा चौरासी वर्ष पूरा हुने र मोक्ष प्राप्तिका लागि भनेर चौरासी पूजा गरिने धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । मानिसहरुको सौभाग्य नै हो पृथ्वीको केही अंश चन्द्रमा सुरक्षित राखिएको कुरा पनि वेदमा नै उल्लेख छ ।
कुनै समयमा पृथ्वीको अस्तित्व स’माप्त भएमा पूजा गर्नको लागि भनेर पहिले नै चन्द्रमामा प’वित्र भूमि राखेको हो भनेर सत् पथ ब्राह्मण नामक वेदको भास्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यही भएर मानिसले ८४ वर्ष यानिकि एक हजारपटक चन्द्रमाको दर्शन गरेमा चौराशी पूजा गर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख गरिएको हो ।
हरेक पूर्णिमामा मात्रै मानिसले पूर्ण चन्द्रमाको दर्शन गर्न पाउँदछन् । हरेक महिनाको एकपटक मात्रै पूर्णिमा तिथि आउँदछ । यसरी एक हजार पूर्णिमा देखेमा चौरासी वर्ष पूरा हुने र मो’क्ष प्राप्तिका लागि भनेर चौरासी पूजा गरिने धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । मानिसहरुको सौभाग्य नै हो, मानव जातिले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विशाल प्रगति गर्न सफल भयो ।
त्यही कारणले आज धर्तीमा रहेका अन्य प्राणीले भन्दा मानिसले सुविधायुक्त जीवन र सुरक्षित जीवनयापनको परिकल्पना गरिरहेका छन् । तर, मानिसहरुको जीवन वर्तमान दुनियाँ राजनीतिक, सामाजिक र पर्यावरणका दृष्टिले व्यापक उथल पुथलको संघारमा उभिएको छ । के मानव जातिले आफ्नो अस्तित्व अब आउने दुई सय वर्षसम्म कायम राख्न सक्ला भन्ने प्रश्नचिह्न पनि खडा भएको छ ।
मानिसहरूका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो भविष्यवाणी भनेको कालान्तरमा पृथ्वीमा कुनै पनि जीवनको अस्तित्व समाप्त हुने सम्भावना पनि रहेकै छ । धार्मिक ग्रन्थमा प्रलयको चक्र चलिरहने भनेर प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । मानव जीवनको अस्तित्व सं-कटमा परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, कुनै पनि उल्का ग्रहहरु पृथ्वीमा ठो’किने स’म्भावना पनि छ ।
पृथ्वीभन्दा अन्य स्थानमा मानव सभ्यताको अस्तित्व रहने छ भनेर कतै पनि व्याख्या तथा चर्चा नगरेकाले आधुनिकीकरण प्रयोग गरेर अरु कुनै ग्रहमा बसेर अस्तित्व कायम गर्छु भनेको सपना मात्रै हो । पृथ्वीमाबाहेक अरु कुनै पनि स्थानमा मानव जातिको अस्तित्व नरहने प्रस्टै छ । अहिले मानव जीवनको अस्तित्व सं-कटमा परिरहेको छ ।
जलवायु प’रिवर्तन, परमाणु यु”द्ध, कुनै पनि उल्का ग्रहहरु पृथ्वीमा ठो’किने स’म्भावना पनि रहिरहेको छ । बिसौं शताब्दीमा आएर मानिसले सुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेको परिकल्पना मात्रै गरिरहेका छ । मानव जीवन अन्तरिक्षमा बसाइँसराइ गराएर सुरक्षित रहन्छ भनेर कसैले सोचेका छौँ भने त्यो सोच मात्रै रहने छ ।
वैदिक दर्शनमा भनिएको छ, मंगल ग्रह पनि भूमिको पुत्र भएकाले त्यहाँ पृथ्वीमा भएको जस्तै माटो ढुङ्गाहरुको कण व्याप्त छ । पूजा गर्ने स्थानमा गएर मानव वसाइँ गर्ने सोचमा रहेका महान वैज्ञानिकहरुको सोच मात्रै हुनेछ । मंगल ग्रहमा भूमिको अस्तित्व छ, तर मानव जीवनको अस्तित्व भने छैन ।
मंगल ग्रह पृथ्वीजस्तै मिल्दो जु’ल्दो मात्रै छ भनेर वेदले बताएको छ । त्यसो त विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथामा समुद्रमा पाइने ढुङ्गाको स्यामपल भेटिएको भनेर वैज्ञानिकहरुले भनिरहँदा के कुनै समयमा सगरमाथा समुद्रको सतहमा थियो ? यदि त्यसो हो भने वेदले भनेको प्र’लयको च’क्र पनि चलिरहन्छ र आगामी समयमा प्रलय भएर पुरै जीवको अस्तित्व पृथ्वीबाट सधैंका लाग समाप्त हुन्छ ।
तर, अन्य स्थानमा मानव अस्तित्व रहने कुनै पनि च’र्चा वैदिक दर्शनमा छैन । अहिलेसम्मकै खतरनाक भनिने ठूल्ठूला बिनाशकारी हतियारको प्रयोग हाम्रा ऋषि महर्षीहरुले गरिसकेका छन् । जुन मानव मस्तिष्कमा प’रिकल्पना गरिन्छ ती सबै कुरा म’हाभारतमा प्रयोग भइसकेकाले विज्ञान भन्दा अगाडि नै वैदिक दर्शन रहेको छ ।
विज्ञानले प’रिकल्पना गरेका सबै कुराहरु हाम्रा ऋषि महर्षीहरुले पत्ता लगाइसकेकाले विज्ञान भन्दा अगाडि वैदिक दर्शन रहेको प्र’माणित हुन्छ । अहिले श’क्तिको बलमा अर्काे दुनियाँमा मानव अ’स्तित्व का’यम गर्छु भनेर बल देखाउनेहरुको पनि यहीँ पृथ्वीमा नै अ’स्तित्व स’माप्त हुन्छ ।
पूजा गर्ने स्थानमा गएर मानव वसाइँ गर्ने सोचमा रहेका महान वैज्ञानिकहरुको सो’च मात्रै हुनेछ । मंगल ग्र’हमा भूमिको अ’स्तित्व छ, तर मानव जीवनको अ’स्तित्व भने छैन । ज्यो.सुरेश चन्द्र रिजाल (सम्पर्क ९८५१०६११२४ इमेल : rijal.suresh123(AT)gmail.com)